Apple hanitatra Reno data center | Avy amin'ny mac aho
Ny vaovao farany tonga aty aminay mifandraika amin'ireo ivon-drakitra Apple, dia manamafy fa te-hanitatra ireo fotodrafitrasa ananany any Reno, Nevada, ry zalahy avy ao Cupertino fananganana foibe angon-drakitra vaovao misy eo akaikin'ilay efa anananao ao amin'ny Reno Tech Park. Ity ivon-data vaovao ity dia ho avo roa heny noho ny iray eo an-dalam-panamboarana ao amin'ilay Technology Park ihany. Ireo antontan-taratasy mifandraika amin'ilay tetikasa, antsoina hoe Huckleberry, dia natolotra ny faritanin'i Washoe, mba hahafahan'izy ireo manome mialoha ny tetikasa ary afaka manomboka haingana araka izay azo atao ny asa.
Matetika i Apple dia manome anarana ny foibem-tahiriny. Ny fidirana data voalohany izay mbola miorina ao Reno, dia antsoina hoe Mills, hanandrana hanodina ny sain'ny olona amin'ny fifaninanana fa tsy avy amin'ny gazety mifandraika amin'ny haitao. Ny Tetikasa ankehitriny dia ahitana trano 14 miorina amin'ny tany iray ihany ka na eo aza ny ivon-kevitra iraisana, raha sendra tranga iray dia tsy hisy fiantraikany mitovy ny data rehetra voatahiry ao.
Ny ivon-drakitra vaovao, tsy toy ilay efa an-dalam-panamboarana, dia hanana fanamboarana tena mitovy amin'ny endriny azo raisina ho toy ny fanitarana ny ankehitriny hahafahana mampiantrano mpizara sy fampahalalana marobe. Apple dia mihevitra fa ny ankamaroan'ny herinaratra ilaina hampandehanana ity ivon-angona ity dia avy amin'ny loharanon'angovo azo havaozina ary noho izany, tato anatin'ny taona vitsivitsy dia nanambola tany amin'ireo ivon-toeran'ny tontolon'ny masoandro izy io, ary koa any amin'ireo firenen-kafa toa an'i Chine, izay misy orinasa maromaro izay manangona ny vokariny dia mampiasa an'io karazana angovo io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Apple hanitatra ny ivon-kevitra Reno